XOG: NISA oo xabsi dhigtay mid kamid ah ilaalada qaaska ee Abuu Mansuur iyo Sababta -News and information about Somalia
Home Warkii XOG: NISA oo xabsi dhigtay mid kamid ah ilaalada qaaska ee Abuu...
XOG: NISA oo xabsi dhigtay mid kamid ah ilaalada qaaska ee Abuu Mansuur iyo Sababta
Warar lagu kalsoonaan karo oo ay heshay Warkii IOnline ayaa ku soo waramaya in mid kamid ah ilaalada Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur ay xirtay hay’adda nabad-sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA
Shaqsigan oo magaciisa lagu soo koobay Madey Aadan ayaa waxaa xalay ku qornaa ilaalada xabsi guri uu ku jiro Roobow, halkaasi oo saqdii dhexe ay ka wateen xubno ka tirsan hay’adda sirdoonka.
Ma cadda sababta loo watay ruuxan, balse waxaa la sheegayaa markii looga shakiyey in uu gacansaar la leeyahay xoogaga Al-Shabaab, isaga oo kamid ahaa dagaalameyaashii lasoo goostay Roobow.
Warbixinada ayaa intaasi ku daraya in ammaanka Mukhtaar Roobow aad loo adkeeyay, isla markaana laga cabsi qabo weeraro abaabulan ama shirqool ay AlShabaab ku beegsato, maadaama laga saarey xabsiga.
Madey Aadan ayaa la sheegay in mudooyinkii dambe uu fasax ugu maqnaa gobolada Koonfur Galbeed, isla markaana lagu arkay calaamado ah in uu sameystay telefoon cusub iyo mashquul aad u badan.
Sikastaba ha ahaatee, hadii ay ku cadaadan tuhunadan ayaa waxaa la sheegayaa in ay sii hurineyso walaaca ay qabeen saaxiibada Roobow taasi oo ahayd in hadii xabsi guri la geliyo uu khatar ugu jiro AlShabaab.
Previous articleXOG: Xisbiyadda Mucaaradka oo isku raacay qorshe ay ku dhabar-jebinayan qorshaha DF ee Galmudug
Next articleXOG: Wasiiro xoog ku degan huteel mulkiilihiisu u habjabtey AlShabaab iyo xiisad culus oo taagan
Soomaaliya oo shirar iyo bandhigyo uga qeybgaleysa dalka Qatar,
DHAGEYSO: Maamulka Degmada Qoryooley Oo Ka Hadlay Weerarkii Al-Shabaab